Abantu Bacabanga ukuthi uMeghan Markle Ukhulelwe Ngoba Ugqoke Ijazi Emshadweni Wenkosazana u-Eugenie - Ukuzijabulisa
Osaziwayo abayi-12 emshadweni wasebukhosini kaPrincess Eugenie Ababengakhulelwe
I-ALASTAIR GRANT / AFP / Getty Izithombe
UMeghan Markle akakwazi ukuphuma endlini (noma esigodlweni, kufanele ngithi) ngaphandle kothile ocabanga ukuthi ukhulelwe. Emasontweni ambalwa edlule, wagqoka izinwele zakhe okokuqala ngqa, kanti uhhafu womhlaba wakuthatha lokho njengophawu olungenakuphikwa ukuthi unengane.
Ukuqagela kuyahlekisa futhi kuyahlasela, futhi kuqhubeka nokuba kubi kakhulu. UDuchess weSussex ubekhona Inkosazana u-Eugenie Umshado kaLwesihlanu, Okthoba 12, ugqoke ijazi lasolwandle. Ngokwemvelo, abantu abaningi bacabanga ukuthi lokhu ngandlela thile kusho ukuthi umboza iqhubu lengane. Naba abantu abambalwa ku-Twitter bakholelwa ukuthi uMarkle 'ufihle okuthile' ngenxa yale ndatshana eyodwa yezingubo:
Ngididekile: Kwenzeka nini ukuthi amajazi abe yisibonakaliso sokuthi umuntu ukhulelwe? Zenze nini izinwele eziqondile, ngalokho? Ngokwami, ngigqoke amajakhethi amathathu kuleli sonto futhi angikhulelwe ngendlela eyisimangaliso. Eqinisweni, abavakashi abaningi emshadweni kaPrincess Eugenie bangeze amajazi ezingutsheni zabo futhi nabo abalindele. Ngiyashaqeka, ngiyazi. Kucishe kube sengathi ukusho amagama athi, 'Ngikhulelwe' ukuphela kwendlela yokuthola ukuthi ngabe umuntu ukhulelwe ngempela yini.
Ngezansi, bheka bonke abashadikazi abanamajazi we-chic kepha ama-zero buns kuhhavini.
indlela yokwenza umhuzuko uhambe ubusuku bonke
Izithombe ze-Getty 1/11
Wore ijakhethi emshadweni; nakanjani angakhulelwa.
Izithombe ze-Getty 2/11
Wore ijakhethi dapper emshadweni; Uqinisekisa iNdlovukazi u-Elizabeth kulesi sithombe ukuthi akakhulelwe.
MATT CROSSICK / AFP / Getty Izithombe 3/11
Wore ijakhethi emshadweni; futhi angakhulelwa.
izipho zeDisney ezihlukile zabantu abadala
Izithombe ze-Getty 4/11
Umkhwenyana, uJack Brooksbank
Wore ijakhethi emshadweni; ngichithe usuku lonke ngicabanga, 'Hawu, ngijabule kakhulu ukushada futhi, ngenxa nje yerekhodi, angikhulelwe.'
Izithombe ze-Getty 5/11
Wore lokho engikholwa ukuthi ijakhethi emshadweni; hhayi okhulelwe.
Izithombe ze-Getty 6/11
Wore ijazi (elide) emshadweni; kulesi sithombe sicabanga ngokoqobo, 'Hey-o! Angikhulelwe! '
Iphuli le-WPA 7/11
UKate Moss nendodakazi yakhe uLila Grace Moss Hack
UKate Moss nendodakazi yakhe uLila Grace Moss Hack bobabili babegqoke amajazi e-chic; akusho ukuthi bakhulelwe.
Izithombe ze-Getty 8/11
Wore ijakhethi emshadweni; yaphuma le moto iyodwa, hhayi nengane.
Izithombe ze-Getty 9/11
Wore ijakhethi emshadweni; isidlo esincane kodwa ungakhulelwe.
Izithombe ze-Getty 10/11
INdlovukazi u-Elizabeth II
Wore ijakhethi emshadweni; regal, hhayi okhulelwe.
Izithombe ze-Getty 11/11
Wore ijakhethi emshadweni; Angazi, bafana ... kungenzeka ukhulelwe? UJK.
uzikhipha kanjani izipikili ze-anc
umbala omuhle kakhulu wezinwele wama-brunette
kanjani ukugqamisa izinwele ezimpunga
kwamagoda amabili nezinwele mbumbulu